मधेश विरोधीले राजीनामा मागे�रक्षामन्त्री भण्डारी
जनकपूर, असोज २९ । रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले मधेश विरोधी तत्वहरु आफनो अभिव्यक्तिलाई बङ्ग्याएर मधेशलाई नै राष्ट्रघाति प्रमाणित गर्न चाहेको आरोप लगाएका छन् । जनकपुर विमानस्थलमा संचारकर्मीहरुसंग
माटोको ढिस्कोले पुरिएर सिराहामा ३ जनाको मृत्यु
सिराहामा घर लिप्ने माटो लिन गएका तीन जनाको माटोको ढिस्कोमा पुरिएर मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा कर्जनाह गाविसका जया यादव, उनकी छोरी १३ वर्Èीया रिङकु
खोटाङमा भाइरल जरोको लहर
खोटाङ,असोज २७| खोटाङमा केही दिनयता भाइरल ज्वरो र झाडापखालाको प्रकोप गाउ गाउ सम्म फैलिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय खोटाङ दिक्तेलले दिएको जानकारीअनुसार दैनिक १ सय
राष्ट्रपति स्वेदश फिर्ता
काठमाडौं, असोज २७ । कतारको चार दिने राजकीय भ्रमण पुरा गरेर राष्ट्रपति रामबरण यादव बिहीबार साँझ स्वदेश फर्किएका छन् । राष्ट्रपति रामबरण यादव कतारको चार दिने
तिवारी हत्यामा मन्त्री शाह दोषि नभएको जिकिर:दाहाल
काठमाडौं, असोज २७ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हिन्दू युवा संघका अध्यक्ष काशीनाथ तिवारीको हत्यामा भूमिसुधार मन्त्री प्रभू शाह दोषि नभएको जिकिर गरेका छन् । दाहाल
Date : 13 Oct 2011
माओवादीद्धारा रक्षामन्त्रीको राजीनामा माग
काठमाडौं, असोज २६ । एकीकृत माओवादी संसदीय बोर्डको बैठकले रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीको अभिव्यक्ति राष्ट्रियता विरोधी भएको भन्दै राजीनामाकालागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । माओवादी संसदीय दलको
रक्षामन्त्री र भुमिसुधार मन्त्रीलाई सरकारबाट नहटाएसम्म संसद चल्न नदिने�काँग्रेस
काठमाडौं, असोज २६ । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय एकता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने रक्षामन्त्री सरदसिंह भण्डारी र हत्या आरोपी भूमीसुधार मन्त्री प्रभु साहको राजीनामा नआएसम्म व्यवस्थापिका संसदको बैठक चल्न
सभाषद बबन सिंहले अनसन तोडे
रौतहट, असोज २६ । जिल्लामा भएका भ्रष्टाचारको छानविनको मागगर्दै तीन दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका स्वतन्त्र सभासद बबन सिंहले बुधवार दिउँसोदेखि अनसन तोडेका छन् । भ्रष्टाचारको छानविन गर्न
Date : 12 Oct 2011
काशी तिवारी हत्याका चार आरोपी विरुद्ध मुद्धा दायर
पर्सा, असोज २५ । हिन्दू युवा संघका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्याका चार आरोपीविरुद्ध जिल्ला अदालत पर्सामा मुद्दा दायर भएको छ । पर्सा जिल्ला अदालतमा प्रहरीले
गुल्मीमा प्रहरीको हत्या
गुल्मी, असोज २५ | गुल्मीको नयाँगाउँमा मंगलबार राति भएको सराय नाचका क्रममा दुईपक्ष बीचको झडपमा भएको खुकुरी प्रहारबाट एक प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तय
काठमाडौं, असोज २५ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको चारदिने भारत भ्रमणको कार्यक्रम तय भएको छ । भ्रमण कार्यक्रम बमोजिम भट्टराई कार्तिक ३ गतेदेखि ६ गतेसम्म भारतको
मन्त्री बचाउका निमित्त रौतहट बन्द
रौतहट, असोज २५ । भूमिसुधार तथा व्यबस्था मन्त्री एवं माओवादी केन्द्रीय सदस्य प्रभु साह विरुद्ध लगाइएको हत्या अभियोगमा मुद्दा नचलाउन दबाब दिंदै माओवादी समर्थकले दोस्रो दिन पनि
Date : 11 Oct 2011
भारतीय अपहरणकरी पक्राउ
नेपालगञ्ज, असोज २४ । नाबालकलाई अपहरण गरेको आशंकामा एक भारतीयलाई प्रहरीले नेपालगञ्जबाट पक्राउ गरेको छ । बांकेको जयसपुरका गाउंलेले कुटपिट गरिरहेको अवस्थामा भारतीय सीमासंग
कैलाली, असोज २४ । कैलालीको वलिया गाविस वडा नम्वर ५ मोतिपुरमा खुकुरी प्रहारवाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । बलिया गाविसको कौवापुरमा सोमबार राति मेला
एनआरएन अध्यक्षमा जीवा लामिछानेको उम्मेदवारी
काठमाडौं, असोज २४ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को आसन्न भेलामा हुने २ वर्षे कार्यकालको चुनावकालागि संघका वर्तमान उपाध्यक्ष जीवा लामिछानेले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्
कोजागत पूर्णिमासँगै वडादशैको समाप्ती
काठमाडौं, असोज २४ । वडादशैको अन्तिम दिन आज देशैभरी धनकी देवी महालक्ष्मीको पूजाआजागरी विशेष रुपमा मनाईंदै छ । यससँगै विजयादशमीको दिनबाट सुरु भएको दशैंको टीका
ट्रक दुर्घटनामापरि दुईको मृत्यु
पाल्पा,असोज २४ | पूर्वी पाल्पाको दर्छा गाविस ३ गिजिन डाँडामा ट्रक दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु भएको छ। एकजनाको घटनास्थलमै र अर्का एक बालकको उपचारका लागि
बबन सिंह आमरण अनसनमा
रौतहट, असोज २४ । सभासद बबन सिंहले सोमबारबाट अनिश्चितकालीन आमरण अनसन सुरु गरेका छन् । देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार र राजनैतिक अपराध विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौर परिसरमा
Date : 10 Oct 2011
आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाईंदै
काठमाडौं,असोज २३। आज अक्टोबर १०, नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाईंदैछ । विश्वमा अहिले ४५ करोड भन्दा बढी मानिस बिभिन्न प्रकारका मानसिक
अवैध लागुऔषध सहित एक पक्राउ
मकवानपुर, असोज २३| प्रहरीले मकवानपुर स्थित रातामाटेबाट अवैध लागुऔषध खैरो हिरोइनसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज घर भएका मेघनाथ कोरी रहेको जिल्ला प्रहरी
दागबत्ती दिए पछि फर्किए दाहाल
चितवन, असोज २३ । मुक्तिराम दाहालको ८५ वर्षको उमेरमा शनिबार राति आफ्नै निवास भरतपुरमा निधन भएको छ ।उनको दसैंअघि राजधानीस्थित अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा एक महिनासम्म विभिन्न
Date : 09 Oct 2011
सरकारी कार्यालयहरु आजदेखि खुल्ने
काठमाडौं,असोज २२| बडा दशैँका अवसरमा बन्द रहेका सरकारी कार्यालय आजदेखि खुल्ने छ सरकारले दशैंका अवसरमा गत १६ असोज अर्थात फूलपातीका दिनदेखि आजसम्मका लागि सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई
Date : 08 Oct 2011
माओवादीमा इमान्दारीता देखिएन : पोखरेल
दाङ,असोज २२।नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोखरेलले माओवादी शान्ति प्रक्रियाप्रति गम्भीर नरहेको आरोप लगाउनु भएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपाल दाङको तुलसिपुरमा शनिबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै
ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा परिवारका पुरै सदस्य घाईते
नेपालगञ्ज, असोज २२। बाँकेको वनकटुवामा खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा छ जना घाइते भएका छन् । वनकटुवा ५ को एच गाउँस्थित अमृता सुनारको घरमा आज
Date : 07 Oct 2011
पार्टीको आन्तरिक विवादले शान्तिप्रक्रियामा असर नपर्ने�नारायणकाजी श्रेष्ठ
चितवन, असोज । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी एमाओवाादीभित्र देखिएको आन्तरिक विवादले शान्तिप्रक्रियामा कुनै असर नपर्ने बताएका छन् । सञ्चारकर्मीसँग
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि लगाइदिए टीका
काठमाडौं, असोज । बडादशैंको अवसरमा विहीबार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि विगतको वर्षहरुमाझैं सर्वसाधारणहरुलाई टीका र जमरा लगाइदिएका छन् । आफ्नो महाराजगञ्ज स्थित निवासमा उपस्थित सर्वसाधारणहरुलाई पूर्वराजाले टीका
काठमाडौं, असोज २० । तारा एयरको पिलाटसपोटर विमान विहीबार लुक्ला विमानस्थलमा अवतरणको क्रममा दुर्घटनामा परेको छ । अवतरणका क्रममा विमानस्थलको बारमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको जनाइएको
विगतभन्दा फरक यसपटकको दशैं
शिव अधिकारी काठमाडौं, असोज । ‘हट्यो सारा हिलो–मैलो, हरायो पानीको वर्षा, भवानीको भयो पूजा, चल्यो आनन्दको चर्चा......’ विगतका वर्षहरुमा दशैं नजिकिदै जाँदा निकै सुनिने लेखनाथ पौड्यालको यस कवितांश
रक्षामन्त्रीलाई वर्खास्त गर्नुपर्ने: सुजाता
नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले देश विखण्ड गर्ने अभिब्यक्ति दिने रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । विराटनगर विमानास्थलमा संचारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै नेतृ
औद्योगिक क्षेत्रमा चार वर्षसम्म बन्द हडताल नगर्ने सम्झौता
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको श्रम सल्लाहकार समिति बैठकले उद्योगी र श्रमिकबीचको न्यूनतम निर्णय गरेको छ। मजदुरको हितका लागि तीन महिनाभित्र सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा
Pages 132 : You are at page 113 of 132